Izixhobo zobunjineli bamandla kunye nezixhobo zeFektri | KwiChina izixhobo zobunjineli bamandla kunye nezixhobo abavelisi, abaXhasi
ombane ophantsi okanye ophakathi omphezulu omphezulu omoya ohamba ngenqwelomoya i-aluminium ABC intambo yentloko ngentambo
I-Aerial Bundle Conductor (intambo ye-ABC) ngumbono ogqwesileyo wokuhambisa umbane xa kuthelekiswa nenkqubo yokuhanjiswa kwentloko engaphezulu. Inika inqanaba eliphezulu lokhuseleko kunye nokuthembeka, ilahleko yamandla esezantsi kunye noqoqosho lweenkqubo ekugqibeleni ngokunciphisa ukufakwa, ukugcinwa kunye neendleko zokusebenza. Le nkqubo ikulungele ukuhanjiswa emaphandleni kwaye ilungele ngokukodwa ukufakwa kwiindawo ezinzima ezinjengeenduli, iindawo zehlathi, iindawo ezingaselunxwemeni njl.
Iintambo zombane ze-PVC (intambo yamandla eplastiki) yenye yeemveliso ezikumgangatho ophezulu zenkampani yethu. Imveliso ayinakho kuphela amandla ombane okuhle, kodwa ikwanokuzinza okuhle kwemichiza, isakhiwo esilula, kulula ukusisebenzisa, kunye nokubekwa kwentambo akunakupheleliswa kukuwa. Isetyenziswa ngokubanzi kwisekethe yesiguquli ekalwe i-voltage yi-6000V okanye ngaphantsi.
1.Ukuseta umatshini osebenzisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu ziintsimbi ezisisinyithi - 2MM ukuya kwi-6MM.
2.Xhotyiswe ngesixhobo esinoxinizelelo oluphezulu-ukufunxa isandi, ukuthintela umlilo.
3. Ijenereyitha exhotyiswe ngebhetri ye-12V / 24V DC ngetshaja, ibhetri idibanisa ucingo.
4. Ijenaliyitha ixhotyiswe ngeeyure eziyi-10-12 kwitanki yezibaso enesalathiso sepetroli, ixesha elide lokusebenza.
Uchungechunge lwekhabhinethi yokuhambisa amandla lilungele i-AC 50 Hz, i-voltage elinganisiweyo ukuya kwi-0.4 KV yokuhambisa umbane kunye nenkqubo yokuhambisa. Olu luhlu lwemveliso ludibaniso lwembuyekezo ezenzekelayo kunye nokuhanjiswa kwamandla. Kwaye kukuyila ngaphakathi nangaphandle koxinzelelo kwikhabhathi yokuhambisa umbane kukhuseleko lokuvuza kombane, ukubala kwamandla, ngaphezulu-ngoku, ukhuseleko kwisigaba esivulekileyo. Inezibonelelo zomthamo omncinci, ukufakwa ngokulula, ixabiso eliphantsi, ukuthintela ukubiwa kombane, ukuqina okunamandla, ukumelana nokuguga, i-Rotor echanekileyo, akukho mpazamo yembuyekezo, njl.Ngenxa yoko iyimveliso efanelekileyo kunye nekhethwayo yohlaziyo lombane wombane.